Rafitra fanatanjahantena-Refrigeration System-Square Technology Group Co., Ltd.
Rehefa afaka 50 taona ny famolavolana, ny famokarana, ny fananganana ary ny fanompoana, dia manana rafitra fampangatsiahana indostrialy an-jatony eran'izao tontolo izao isika. Fantatra ihany koa isika amin'ny famolavolana sy fananganana ny rafitra cascade CO2, Freon, Ammonia manerana an'izao tontolo izao.
Ny ampahany amin'ny vata fampangatsiahana ekena iraisam-pirenena ihany no ampiasainay. Ohatra, ny Compressor dia German Bitizer, Japanese Mycom. Valves dia Danfoss, Emerson. Ny sambo faneriterena rehetra dia miorina ao an-trano amin'ny fanajana tanteraka ny American Society of Mechanical Engineers (ASME). Ary ny welders sy ny teknisianinay dia voamarina ASME. Manana ny masinina milina fantsom-boaloboka kanto isika, roller, fitaovana fanandramana radiolojia mba hahazoana antoka fa azo itokisana ireo sambo faneriterena ho an'ny rafitra fampangatsiahana ary mahafeno ireo fehezan-dalàna mifehy ny sambo iraisam-pirenena.
● Marika compressor sy fittings fanta-daza iraisampirenena: MYCOM, BITZER, KOBELCO, FUSHENG, Danfoss, Parker
● Sehatra ifotony vy.
Hafainganam-pandeha semi-hermetika sy volo mihidy.
● Fanaraha-maso tsy tapaka herinaratra defrost.
● Menaka mekanika sy elektronika, fanala ary fanaraha-maso ny haavon'ny rano.
● Mpandray marindrano sy mitsangana miaraka amin'ny mari-pamantarana ambaratonga ranon-javatra sy valizy fanala tsindry.
● Tsipika suction mitaingina.
● Fanamboarana henjana misy tavy miaraka amina fantsona efa niorina, tonon-taolana brazed kely ary fittings kely.
Ny andrana dia mivoaka an-tsokosoko ao anaty ozinina.
● Ny sambo fanerena rehetra dia mety ASME, PED voamarina rehefa angatahina.
Data ara-teknikan'ny Vondron-tsoratry ny kompresy Screw Semi-hermetika
Data ara-teknikan'ny Vondron-tsoratry ny sokiro sekretera MYCOM misokatra